Posted by Tranquillus | Feb 12, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Mawduuca uu doono ha ahaadee, diyaarinta qorshaha qorista had iyo jeer wuxuu ahaa sharci muhiim ah in la ixtiraamo inta dugsigeena oo idil. Maanta, dadka intiisa badani way iska indhatiraan talaabadan oo waxay ku dambeeyaan dhibaatooyin cawaaqib xumo ah. Sida iska cad, waxaan mas'uul ka nahay mid kasta oo ka mid ah xulashadeenna. Waxaan isku dayi doonaa inaan ku tuso sida la'aanta qorshaha qorista ay qalad u tahay.
Qorshe qoraal, waa shardi aasaasi u ah abaabulka fikradahaaga
Kahor intaanan fikradaheena qorin, waxaa lagama maarmaan ah in la abaabulo iyadoo la adeegsanayo qorshe habeysan si loo hubiyo joogteynta fariinta la soo gudbin doono.
Qorshuhu wuxuu kaa caawin doonaa inaad maamusho ama abaabusho dhammaan macluumaadka la xiriira mowduuc la siiyay. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan macluumaadkan. Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cilmi baaris si aad u xulato waxa ugu habboon. Diyaarinta qorshaha ayaa imaan doonta tan xigta. Tani waa tallaabo aad muhiim u ah, maadaama ay fikradahaaga isugu keeneyso mid isku wada dhan.
Guud ahaan, dulmarku wuxuu sheegaa fikradaha ugu waaweyn ee qoraalka, waxaana ku xigaa figrado-hoosaadyo, tusaalooyin ama xaqiiqooyin lagu muujiyo. Sidaas darteed looma baahna in laga walwalo xulashada erayada, iyo sidoo kale qaab-dhismeedka weedhaha. Marxaladdan, tani waa uun soo koobid kooban oo ku saabsan qoraalada soo socda. Tani waxay ku siinaysaa xoogaa xorriyad qoris ah. Tani waa hab wanaagsan oo aad adigu isugu taxallujin karto kala saarista macluumaadka aad ku soo qaadan lahayd qoraalkaaga.
Ma jiraan wax qoraal ah ama qoraal ah oo aan marka hore la ururin macluumaad aad u tiro yar. Talaabadan guud ahaan waxaa raaca kala soocid ka dibna kala soocida macluumaadkan. Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah in laga soo baxo fikradaha waaweyn, fikradaha labaad iyo wixii la mid ah. Tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu doorto habka loo soo bandhigo fikirkaaga, iyadoo laga caawinayo akhristaha kasta inuu fahmo fariintaada oo uu u akhriyo dhib la'aan.
READ Erayada asluubaysan si aad uga fogaato iimaylka xirfadlayaasha ah
Marka horeba, waxaa lagama maarmaan ah in aragtida la dhigo udub dhexaadka maaddada la horumarinayo. Sidaa darteed waa su'aal la weydiinayo su'aalaha soo socda: maxaa, maxaan ka qoraa ? Kajawaabida su’aalahan waxay u dhigantaa soo jeedinta jumlad gaagaaban, tusaalaynaysa cinwaan weyn, kaas oo ka kooban mawduuca oo si guud u sheegaya fikradda in loo gudbiyo qofka qaata.
Markaa markaa waa inaad abaabushaa fikradahaaga, midna kan kale la jaan qaadaya. Fikradayda, farsamada ugu fiican ee lagu muujiyo hal-abuurkaaga oo aad u ururiso dhammaan macluumaadka ku saabsan mawduuca waa Mind Mapping. Tani ma aha oo kaliya inay kuu oggolaato inaad aragti kooban ka heysato fikradaha kala duwan, laakiin sidoo kale waxay dejineysaa xiriirada ka dhexeeya. Nidaamkan waxaad hubin doontaa inaad ku wareejiso su'aasha.
Tallaabada koowaad :
Waxay ku bilaabaneysaa:
ururi wixii fikrado ah ee waxtar u yeelan kara qoraalkaaga,
u kala saar kuwa ka tirsan hal qoys hal nooc iyo isku nooc,
tirtir kuwa, marka la eego ujeeddooyinkaaga, ugu dambeyntii aan loo baahnayn,
ku dar macluumaad kale sida loogu baahdo ee xiisaha u yeelan kara akhristahaaga.
Tallaabada labaad :
Hadda waxaad u baahan tahay inaad abaabusho fikradaha aad dooratay, taas oo ah, go'aamiso fikradaha labaad si aad u soo saarto farriin kooban. Voltaire, shaqadiisa suugaaneed " daacad ah ", Wuxuu u socdaa isla jihada isagoo xaqiijinaya:" Sirta caajisku waa in wax walba la sheego ". Waxaan halkan kula macaamileynaa nidaam wax ku ool ah oo loogu talagalay qorista guuleysiga.
Go'aaminta xaaladda xiriirka ?
Aynu ku bilowno xusuusinta in xaaladda wada xiriirka ay si weyn u saameynayso doorashada qorshaha qorista. Tani waxay ku saleysan tahay taxane shan su'aalood:
Waa kuma qoraagu ? Waa maxay ujeedkeedu?
Yuu yahay bartilmaameedka loogu talagalay qoraalkaaga ? Muxuu yahay cinwaanka ama shaqada aqristaha marka loo eego qoraaga? Waa maxay xiriirka ka dhexeeya qoraaga iyo akhristayaashiisa? Qoraalkiisu ma wuxuu ku saleysan yahay qofka uu yahay ama ma magaca cinwaankiisa, mise xitaa magaca shirkadda uu matalayo? Maxaa qiil ka dhigaya fahamkiisa shaqada? Maxay muhiim u tahay inuu aqriyo?
Maxaa loo qoraa ? Ma si loo siiyaa akhristaha macluumaad, si looga dhaadhiciyo xaqiiqo, si looga helo falcelin isaga ka timid? Muxuu qoraagu u rajaynayaa akhristayaashiisa?
Waxaa lagama maarmaan ah inaad xusuusato qoraalka qoraalka xirfadleyda ah inuu yahay hab isgaarsiinta oo leh astaamo gaar ah. Qofka ku aqrinaya waxaad lahaan doontaa filasho gaar ah. Mise adiga ayaa wax u qori lahaa codsi ama inta aad sugeysid jawaab cayiman.
Waa maxay fariinta ku saleysan ? Maxaa fariinta sameeya?
Ma jiraan duruufo gaar ah oo qiil u sameynaya qoraalka ? Haddaba, waxaa lama huraan ah in si adag loo go'aamiyo goobta, iyo sidoo kale waqtiga, ama xitaa habka ugu habboon in la gudbiyo fariinta (ma tahay email, warbixin, warqad maamul iwm).
Ka dib markaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha kor ku xusan, waxaad dooran kartaa qorshe qoris. Sida aan ku arki doonno maqaalada dambe, ma jiro kaliya hal qorshe qoris, laakiin wax badan. Macno malahan waxaad qorsheyneyso inaad qorto, waxaa soo baxday in ku dhowaad dhammaan yoolalka wada xiriirka ay leeyihiin qorshe. Waxay ku saabsan tahay wadaagista macluumaadka, soo jiidashada dareenka, ku qancinta mowduuc la siiyay ama soo qaadista nooc falcelin ah.
READ Qor email haddii ay dhacdo maqnaansho
Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay qorista qoraalkaaga xirfadeed? Febraayo 12, 2021Tranquillus
horeWaxaan jecelahay inaan iraahdo cilmi baaristu ma ahan orod, laakiin waa maaratoon!
socdaXisaabinta tusmada sinnaanta xirfadeed: ma jiraan waxyaabo u gaar ah UES?